Shina avo aryry tokana Lighting Pole mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Home > Products > avo andry tokana Lighting Pole
Fitaovana haingam-pandeha avo lenta 18 m hatramin'ny 50m, Mety ho an'ny seranam-piaramanidina, seranan-tsambo, plaza, kianja, kianja, garan-dalambe, lalana eny an-dalambe, snsï¼ A36, tanjaky ny famokarana ambany indrindra = = 235n / mm2, Fandefasam-pandrefesana + - 2%.
Fahazavana avo dia avo Fahazavana maivana 400 W- 5000 W ny tsindry sodium tondra-drano, fanitarana jiro: hatramin'ny 30000 mÂ², Light plateVarious tarehimarika mifantina, fitaovana miaraka amina rano miorim-bolo mandevona, ny rafitra misintona Lifter miorina ao anaty ao amin'ny andry miaraka hafainganam-pandehan'ny 3 ~ 5 metatra isan-minitra.
High Mast Light Pole feno eantiferromagnetism tapaka ary manaparitaka fitaovana fanaporofoana, fandidiana manual ampiasaina eo ambanin'ny fanapahana herinaratra fitaovana fanaraha-maso Fitaovana fampitaovana herinaratra ho enti-mitazona ny tsato, mety ho 5 metatra miala ny tsato amin'ny alàlan'ny tariby. Ny fanaraha-maso maivana dia mety ho tonga saina hanatanteraka ny jiro feno feno sy ny fizarana jiro fanaovan-jiro amin'ny endrika fitsaboana mafana izay azo avy aorian'ny fanarahana ASTM A 123, ny herin'ny polyester na ny fenitra hafa rehetra ataon'ny client.Joint of poles Insert mode, ny mode flange anatiny, mifanatrika. fomba fiarahany .Indroaka ny horohoron-tany tany amin'ny kilasy 8, Wind Speed ​​80 Km / Ora.
Buy avo andry tokana Lighting Pole nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba avo andry tokana Lighting Pole ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized avo andry tokana Lighting Pole Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.